Category Uncategorized – Xogsoor News Network
Xog Run ah
Waamaxay Farqiga u dhexeeya Corona iyo Hargab.?
Puntland oo Dacwo ka ah Sheekh Rusheeye
Saxaafada Puntland oo bilowday Qaab cusub oo ay u gudanayan Shaqadooda.
Museveni Oo kordhiyay Bandowga Uganda.
Kooxda Al-Shabaab Oo Kordhisay ‘Afduubka’ Ay Ka Geysato.
Cudurka karoona Ma ahan mid la mid ah Hargebka, sida soomaalida qaar ay ku kadsoomaan iskuna barbardhigaan labadooda awood waa labada cudure. Faah faahin ku saabsan Cudurkan iyo farqiga u dhexeeya Corona iyo Hargabka Hoos ka daawo. Siddee ayuu u faafaa Covid-19Muuqaalkani waa wacyigelin kooban oo ku saabsan sidda qofka isaga ilaalin karo Covid-19. More...
Xukuumada Puntland ayaa Shiikh Rusheeye dacwad ka gudbisey markii uu ka tegey deegaanada Puntland. Wasaarada cadaalada ayaa sheegtay inuu gudbiyey fariimo marin habaabin ah oo ku aadan cudurka Carona Virus. Shiikh More...
Wariye yaal ka howlgala magaalada Boosaaso xarunta gobolka bari ayaa muujiyay Talaabo u baahan in lagu daydo taas oo ay isku ilaalinayaan shaqadoodana ku wadanayaan. Waxaa maanta muuqatay xili ay ra’yi More...
Xili mudooyinkii u dambeeyay magaalooyinka wadanka uganda ay ahaayeen kuwo ku jira xaalad bandow ah sababo la xiriira cudurka saameynta xooga badan ku yeeshay caalamka idilkiis ee Corona Virus ayaa maanta mudo More...